Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezihlaziyiweyo » Apho i-90 pesenti yokugawulwa kwamahlathi emhlabeni jikelele ivela khona
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba ezihlaziyiweyo
Iindaba zokuhamba kwi-Intanethi
Ulimo luhlala lungoyena mqhubi uphambili wokugawulwa kwamahlathi kuyo yonke imimandla ngaphandle kweYurophu, apho uphuhliso lwedolophu kunye neziseko zophuhliso lunempembelelo ephezulu, uphando luthi. Ukuguqulelwa ekubeni ngumhlaba wezityalo kukongamela ukulahleka kwamahlathi eAfrika naseAsia, ngaphezu kwama-75 ekhulwini amahlathi aphulukene nezityalo. EMzantsi Merika, phantse ikota yesithathu yokugawulwa kwamahlathi kubangelwa kukutyisa imfuyo.
Ukwandiswa kwezolimo kuqhuba phantse iipesenti ezingama-90 zokugawulwa kwamahlathi kwihlabathi-impembelelo enkulu kakhulu kunokuba bekucingelwa ngaphambili, uMbutho woKutya kunye nezoLimo weZizwe eziManyeneyo (i-FAO) uthe xa ukhulula iziphumo zokuqala zoPhando lwayo lwe-Global Remote Sensing namhlanje.
Ukutshatyalaliswa kwamahlathi kukuguqulwa kwehlathi kwezinye iindawo zokusetyenziswa komhlaba, ezifana nezolimo kunye neziseko zophuhliso. Ehlabathini lonke, ngaphezu kwesiqingatha selahleko yamahlathi ngenxa yokuguqulwa kwehlathi libe yintsimi yezityalo, ngoxa imfuyo ijongene nelahleko ephantse ibe ngama-40 ekhulwini, ngokutsho kohlolisiso olutsha.
Idatha entsha ikwaqinisekisa ukucotha ngokubanzi kokugawulwa kwamahlathi kwihlabathi jikelele ngelixa ilumkisa ukuba amahlathi ashinyeneyo, ngakumbi, aphantsi koxinzelelo oluphezulu lokwandiswa kwezolimo.
“NgokoVavanyo lwamva nje lwe-FAO ye-Global Forest Resources Assessment siphulukene neehektare ezizigidi ezingama-420 zamahlathi ukusukela ngo-1990,” utshilo uMlawuli-Jikelele we-FAO u-QU Dongyu namhlanje kwintetho elungiselelwe iNkomfa yama-26 ye-UN yoTshintsho lweMozulu yamaQela (COP26) kwinqanaba eliphezulu. Ingxoxo enesihloko esithi “Ukunyusa amaNyathelo okuguqula iTide ekugawulweni kwamahlathi” apho iFAO ibonise iziphumo ezintsha. Ukuza kuthi ga ngoku, ugxininise ukuba ukwandisa imveliso yokutya kwezolimo ukuhlangabezana neemfuno ezintsha zokwanda kwabemi kunye nokunqanda ukugawulwa kwamahlathi akuzonjongo zokusebenzisana.
Ukuguqula umsinga wokugawulwa kwamahlathi kunye nokunyusa inkqubela phambili ezuzwe nzima kulo mphambili kubaluleke kakhulu ukubuyisela umva ngcono kwaye ube luhlaza ngakumbi kubhubhani we-COVID-19, uQu wongeze watsho.
Ukuze siphumelele kumzamo onjalo, kufuneka sazi apho kwaye kutheni ukugawulwa kwamahlathi kunye nokuwohloka kwamahlathi kwenzeka kwaye apho kufuneka inyathelo, uMlawuli-Jikelele uthe, eqaphela ukuba oku kunokuphunyezwa kuphela ngokudibanisa izinto ezintsha zobuchwepheshe zamva nje kunye nobuchule bengingqi emhlabeni. . Uphando olutsha lusebenza njengomzekelo omhle wendlela enjalo.
Ukwandisa imveliso yokutya kwezolimo ukuhlangabezana neemfuno ezintsha zokwanda kwabemi kunye nokunqanda ukugawulwa kwamahlathi akuzonjongo zokusebenzisana. Angaphezu kwama-20 amazwe asakhasayo asele ebonisile ukuba kunokwenzeka ukwenjenjalo. Eneneni, inkcazelo yakutshanje iqinisekisa ukuba ukugawulwa kwamahlathi kuye kwancitshiswa ngempumelelo eMzantsi Merika naseAsia
Amahlathi ashinyeneyo asengozini
Ngokutsho kwedatha entsha, kwi-2000-2018, uninzi lokutshatyalaliswa kwamahlathi kwenzeka kwi-tropical biomes. Ngaphandle kokucotha kokutshatyalaliswa kwamahlathi kuMzantsi Merika naseAsia, amahlathi ashinyeneyo kule mimandla asaqhubeka ebhala awona mazinga aphakamileyo okutshatyalaliswa kwamahlathi.
Abaqhubi bokutshatyalaliswa kwamahlathi bayahluka kwimimandla yehlabathi
Uphononongo olukhokelwa yi-FAO lwenziwe kusetyenziswa idatha yesathelayithi kunye nezixhobo eziphuhliswe ngokubambisana neNASA kunye neGoogle, kunye nentsebenziswano esondeleyo kunye neengcali zelizwe ezingaphezu kwe-800 ezivela kumazwe aphantse abe yi-130.
I-Dialogue yeNqanaba eliphezulu yadibanisa iintloko kunye neenqununu zeNtsebenziswano yoBambiswano kwimibutho yamalungu eHlathi ukuze kwakhiwe umfutho kwizenzo zemozulu ezisekelwe kwihlathi phantsi kwenyathelo likaNobhala-Jikelele we-UN ekuguquleni i-Tide kwi-Deforestation. Esi siganeko siya kuba negalelo elikhulu kwiNgqungquthela ye-Stockholm + 50, iseshoni ye-17 yeForam yeZizwe eziManyeneyo malunga namaHlathi (UNFF17) kunye nophononongo olunzulu lwe-SDG15 (Ubomi emhlabeni) yiForam yePolitiko eZinzileyo. Uphuhliso (HLPF) ngo-2022.
Umsebenzi weFAO wokuphelisa ukugawulwa kwamahlathi
Ukuthathela ingqalelo amakhonkco amaninzi phakathi kwamahlathi, ezolimo kunye nokhuseleko lokutya, isicwangciso esitsha se-FAO siya kukhokelela iinzame zokuguqula iinkqubo zokutya kwezolimo ukuba zisebenze ngakumbi, zibandakanyeke, zomelele kwaye zigcineke.
Kunye neNkqubo yoPhuhliso ye-UN (UNDP) kunye neNkqubo ye-UN Environment (UNEP), i-FAO ixhasa amazwe angaphezu kwama-60 ekuphumezeni izicwangciso zokunciphisa ukukhutshwa kokukhutshwa kwamahlathi kunye nokutshatyalaliswa kwamahlathi nge-UN-REDD.
I-FAO ikwakhokela iShumi leMinyaka yoBuyiselo lwe-Ecosystem kunye ne-UNEP, ithuba elibalulekileyo lokukhawulezisa iimbono ezivelisa izinto ezintsha kwizenzo zamabhongo.
Ngaphaya koko, iNgqungquthela yeeNkqubo zoKutya ze-UN yamva nje yenze imanyano phakathi kwamazwe avelisa iimveliso kunye nabathengi, iinkampani kunye nemibutho yamazwe ngamazwe ukunqanda ukugawulwa kwamahlathi kunye neempembelelo ezinobungozi zokusingqongileyo zokuguqula umhlaba uvelise imveliso yezolimo.
I-Collaborative Partnership on Forests, ekhokelwa yi-FAO, idibanisa i-15 imibutho yamazwe ngamazwe, iphuhlisa inyathelo elidibeneyo lokuguqula i-Tide kwi-Deforestation ukukhawulezisa izenzo kunye nokunyusa impembelelo.